टुप्पाबाट पलाएकाहरुले हामीलाई मुख बन्द गर्न खोज्ने ? सके छातीमा गोली ठोके हुन्छ मेरो देशको सीमा मिच्दा म बोल्छु, सके छातीमा गोली ठोके हुन्छ – पुर्बजर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यात - Nepali Taja Khabar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/टुप्पाबाट पलाएकाहरुले हामीलाई मुख बन्द गर्न खोज्ने ? सके छातीमा गोली ठोके हुन्छ मेरो देशको सीमा मिच्दा म बोल्छु, सके छातीमा गोली ठोके हुन्छ – पुर्बजर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यात
काठमाडौं। नेपालआजका नियमित स्तम्भकार डा. प्रेमसिंह बस्न्यातले गलत कुरालाई ढाकछोप गर्ने बानी परेकाहरुले आफ्नो चरित्रहत्या गन खाजेको दावी गर्नुभएको छ । नेपालआजमा उहाँको स्तम्भ ‘स्ट्रेट फरवार्ड’मा बोल्दै आफूलाई कारबाही गर्ने बेकारको हल्ला चलाइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले आफूलाई सैनिक ऐनले छुन नसक्ने बताउनुभयो । आफू अरु नागरिक सरह भएका कारण सरकारले सेनालाई वैशाखी बनाएर आफूमाथि प्रहार गर्न छाड्नु पर्ने बताउनु भयो । प्रस्तुत छ उहाँसँग भएका कुराकानीको सारः
तपाईंलाई नेपाली सेनाले कारबाही गरेको कुरा साँचो हो ? मविगतमा नेपाली सेनामा काम गरेको पूर्वसैनिक हुँ । मैले नेपाली सेना, देश र सार्वभौमसत्तालाई सधै सम्मान गर्दै आएको छु । मलाई सेनाले कारबाही गर्न पनि सक्दैन । मैले गलत बोले भने मलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ । सेनाको बैशाखी टेकेर मलाई कारबाही गर्र्न सरकारले सक्दैन । सरकारको तागत छ भने मलाई सेनाको वैशाखी नटेकी कारबाही गरेर देखाओस् । मलाई सरकारको डर मान्ने अवस्था छैन । मलाई कसैले, मेरा जेष्ठहरुले कुनै सुझाव दिए भने म मानिदिन सक्छु । मेरा शुभेच्छुकको सुझावबमोजिम केही दिन नबोलेको मात्रै हुँ । ओली र रक्षामन्त्रीको डरले नबोलेको होइन।
(निर्बाण तर्फ मात्र सहि एउटैबाटो) -मनुष्यहरूको मन दिन प्रतिदिन जलेर धमिलो र मैला भइरहेको छ । लोभ भनेको धमिलो र मैला हो । क्रोध भनेको पनि धमिलो र मैला हो । मोह पनि धमिलो र मैला हो । अभिमान पनि धमिलो र मैला हो । र ईर्ष्या र मत्सर्य भन्ने धमिलो र मैलाको कारणले चित्त सङ्लो नभएको हो । चित्त सङ्लो नभएको कारणले सत्व प्राणीहरू दुःखबाट पार हुन सक्दैनन् । किलेशको मैलाले हर्दम जलाई रहेको हुन्छ ।
-त्यो चित्तलाई सङ्लो बनाउनको लागि, नराम्रा सोचाइ मनहरू हटेर जानको लागि एउटै भएको विपस्यना कर्मस्थानलाई आचरण गर्नु पर्छ भनिएको हो । -मन सङ्लो भएर आयो भने पछि स्थावर सुखहुने निर्बाण, बृद्ध हुने दुःख, रोगी हुने दुःख, मर्नु पर्ने दुःख नभएको निर्बाण पुग्नको लागि कुन बाटो जानु पर्छ भन्दा यहि विपस्यनाको बाटो हिड्नाले न (ञायस्स अधिगमाय) निर्बाणको बाटोलाई देखिन्छ । बसेर प्राथर्ना गर्दैमा सुख त अवश्था मिल्छ, तर निर्बाणको बाटोमा पुग्न सकिन्न ।
-पल्लो किनार तर्ने इच्छा भएका एक ब्यक्तिले ओल्लो किनारमा बसेर ए ! पल्लो किनार मसंग आउन । तपाईंलाई पल्लो किनार तर्ने इच्छा छ भने, त्यो पल्लो किनार तपाईं भएतिर आउन सक्ला ? यो चाहिँ भगवान बुद्धले दिनु भएको उपदेश हो । पल्लो किनार पुग्नु छ भने उपाय खोज्नु पर्छ । उपाय खोज्नु पर्दा चढेर जाने पानी जहाज, ढुङ्गाहरू केही छैन भने पानीमा पौडेर भएपनि एक एक प्रकारले नगइ कन पल्लो किनार पुग्न सकिएला ? पुग्न सकिदैन ।
-त्यसैले (निब्बानस्स सच्चिकिरियाय) निर्बाण भनेको देख्ने इच्छा भए यो काम गर्नु पर्छ । यो धर्मलाई कोसिस गरेर आचरण गर्नु पर्छ भनेर भन्न चाहान्छु। यो बाटो हिँड्ने भने अन्तिममा निर्बाणसम्म पुगिन्छ । भगवान बुद्धले (एको यन अयं भिक्खवे मग्गो)भन्दै(पुब्बभागमग्गो) भनिएको विपस्यना आचरणलाई (एकोयन)निर्बाण जाने बाटो एउटै हो भनि भन्नु भएको छ । र त्यहि विपस्यनाको बाटो हिड्नु भनि भन्नु भएको छ ।
-चाहे उमेर धेरै भएका व्यक्तिहरू हुन, चाहे उमेर कलिलैका हुन मन, चित्त जलि रहेको, मन धमिलो मैला भएको कसैलाई मन पर्दैन । ति मन नपर्ने जलाउने चिजहरूबाट सुभिमुक्त हुनको लागि विपस्सना आचरण भनेको कुनै जनजाति भेदभाव नगरिकन, ईष्त्री, पुरूष नरोजिकन,बृद्धहरू,भर्खरैका उमेर भएकाहरू सबैले आचरण गर्न योग्य छ भनिएको हो।
-आचरण गर्ने हो भने आचरण गरे अनुसार फल भोग्न पाइन्छ।आचरण गरिएन भने एक न एक प्रकारको दुःखहरूसँग सामना गर्दै जलाइ राख्ने शोक चिन्ताहरूबाट कहिल्यै छुट्कारा पाउन सकिने छैन । उपकारी– सयकडो फयाजी अग्ग महा पण्डिता भद्दन्त Dr नन्दमाला भिवंस (Ph.D) विपस्यना भावना चालिस प्रकारका धर्म देशनाबाट निकालेर पूजा गरिएको हो। अनुवाद निर्मल Mgk
सु सहभाजन –बिष्णु धनञ्जय